R/wasaare Gaas oo booqday xerada Badbaado, cambaareeyeyna falkii weerar ee maanta; tirada dhimasha oo sii korortay. – Radio Daljir
Agoosto 5, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, Aug 05 – R/wasaaraha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyey falkii waxashnimada ahaa ee maanta lagu weeraray xerada Bad-baado laguna laayey dad masaakiin ah iyadoo dhinaca kalena la boobay raashin mucaawimo ah oo dadkaasi loo qaybinayey.
R/wasaare Prof. Cabdiweli Maxamed Cali ‘Gaas’ ayaa hadalkaan cambaaraynta ah ka jeediyey xerada Bad-baado dhex-deeda oo uu kormeer ku tagay maanta kaddib markii xeradaasi ay dil iyo dhac ka gaysteen rag hubaysan oo aan wali haybtooda la aqoonsan.
Mudane Gaas, ayaa falkaasi ku tilmaamay in uu ahaa mid waxashnimo ayna dawlad ahaan aad uga xunyihiin, isagoo ku goodiyey in ay maxkamad soo taagi-doonaan dadkii falkaasi gaystay ayna la kulmi-doonaan ciqaab u qalanta.
R/wasaaruhu, hadalkiisa uu ka jeediyey xerada Bad-baado waxaa uu ku sheegay in ay arrintaasi u saareen guddi-baaritaan kuwaasi oo soo xaqiijin doona sida wax u dhaceen iyo cidda soo maleegtay falkaasi gurracan ee dhaca iyo laynta iskugu jira.
Prof. Gaas, waxaa uu dhinaca kale sheegay ciidanka ammaanku in ay ku guulaysteen soo qabashada intii badnayd hantidii la dhacay, ayna gacanta ku soo dhigeen raashinkii laga boobay xerada Bad-baado kaasoo dhammaa illaa 156 kiisha oo iskugu jiray qaybaha kala duwan ee cunnooyinka la quuto, waxaana sidoo kale uu sheegay in ay haatan wax ka baddaleen ammaanka xerada loona qoondeeyey ciidan gaar ah oo illaaliya amniga xeradaasi Bad-baado.
Dhinaca kale waxaa sii kordhaysa tirada dhimasho ee la dhalatay weerarkii lagu qaaday xerada Bad-baado kaasoo haatan gaaraya illaa 8 ruux sida ay idaacadda Daljir u xaqiijiyeen ilo-wareeddo lagu kalsoonaan karo oo ku sugan xerada Bad-baado ee maanta la boobay, waxaana isla weerarkaasi ku dhaawacmay tiro kale oo badan.
Dadka dhintay ayaa la tilmaamayaa in ay iskugu jiraan barakacayaashii xeradaasi ku dhaqnaa iyo qaar ka mid ah illaaladii raashinka, inkastoo la xaqiijinayo dhimashada ugu badani in ay soo gaartay barakacayaashii Bad-baado.
Xerada Bad-baado ayaa waa xero hooy u ah barakacayaal aad u tiro badan oo ku soo sal-kacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya iyo qaar ka mid ah gobollada dhexe ee Soomaaliya, waxaana xeradaasi asaastay dawladda federaalka si dadkaasi loogu daryeelo.
Qaramada Midoobey oo sheegtay in saddex goobood oo kale oo Soomaaliya ah macaluuli ka dillaacday.